Buy Pregnyl any Thailand - hormone anabolic steroid in Bangkok
Regular vidiny 3,000.00 ฿ Sale
Pregnyl ® 5000 IUpowder ho an'ny vahaolana amin'ny fandefasana.
Miaraka amin'io didy io
Ny vokatra Pharmachologic:
Ny voka-dratsin'ny fivalozana dia ny kôronôna gonadotropine,
Izay azo avy amin'ny fanasitranana ny vehivavy bevohoka.
Pregnil dia mandrisika ny fampiroboroboana hormonina amin'ny steroid amin'ny fihanaky ny firaisana ara-nofo noho ny vokatra,
Ny toetra mampiavaka ny hormonina olombelona (LH).
Ao amin'ny vehivavy, ny fanafody dia miteraka fitomboan'ny fanjary progesterone sy estrogens taorian'ny ovulation,
Ny marary dia manosika ny fampidirana ny testosteron.
Ny endriky ny antikôlôjia amin'ny gonadotropine chorionika ao amin'ny vatana dia tsy voamarina amin'ny fampidirana ny fampakaram-bady.
Ny haavon'ny kôronôna gonadotropine (hCG) ao amin'ny plasma blood ao amin'ny vehivavy dia voafaritra aorian'ny ora 20,
Ao amin'ny lehilahy - aorian'ny ora 6 (aorian'ny fampidirana, intramuscularly indray mandeha).
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny famokarana kininina amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia vokatry ny haben'ny haavon'ny tsiranoka
Fiofana amin'ny vehivavy eo amin'ny rambony. Aorian'ny fitsaboana amin'ny intramuscule, ny hCG dia miorina tsara amin'ny rà.
Ny antsasaky ny fahalavoana dia ny ora 33. Ny 80% eo ho eo amin'ny zava-mahadomelina dia rava ao amin'ny vatan'ny voa. Famonoana - miaraka amin'ny urine.
• fihenan'ny fahafaha-mitombo amin'ny herisetra mifandray amin'ny tsy fahampiana idiômatika;
• fampiatoana ny fivoaran'ny firaisana ara-nofo amin'ny ankizilahy, noho ny tsy fisian'ny gonadotropic fonosin'ny sela mpitrandraka;
• cryptorchidism (afa-tsy noho ny fampidirana anatomika).
• amin'ny fandaharan'asan'ny ART (fanampiana teknolojia fanabeazana) hanomanana ny folicle amin'ny fanasaziana ny fanasaziana ny hipetrahan'ny mpifindrafindrao mifehy;
• fampidirana ny ovulation miaraka amin'ny tsy fahampian-tsakafo miaraka amin'ny fivalanana na ny fanovozana tanteraka;
• fanohanana ny luteal dingana ilay tonga fotoana voalohany (anisan'izany tamin'ny fotoana maso ovarian hyperstimulation amin'ny nanampy pananahana teknolojia) izay mitohy amin'ireo chorionique-hanafahana hormonina analogies na zava-mahadomelina noho ny mandrisika ny famokarana atodinaina, amin'ny vehivavy tsy fiterahana vokatry ny anovulation noho ny tsy fahampian'ny asa ny estrogens Avy amin'ny fiaviana endogenous Araka ny sokajin'ny WHO - tsy ampy ny vondrona voalohany ovaire).
Alohan'ny fampidirana ao amin'ny vatana mavitrika amin'ny fambolena, dia alefa ny solvent. Manomàna tsikelikely tsikelikely. Tsy vahaolana ny vahaolana voaomana, satria tsy azo antoka ny fiarovana ny tsy fahampian'ny vahaolana. Ireo dosage ireo dia tsy misy dikany, ny fitsaboana dia tokony hanitsian'ny mpitsabo tsirairay fa miankina amin'ny fanehoan-kevitra ilaina amin'ny fampidirana ny fatiantoka.
Fanomanana ny folicle ho an'ny fanasaziana na fanindronana ny ovulation: indray nampidirina dòz 3000-10 000 IU.
Fanohanana ny vanim-potoan'ny luteal amin'ny vanim-potoanan'ny ratra: dingan'ny 1000-3000 IU indray mandeha isan'andro. Miisa 2-3 tsindrona omena: isaky 1 time in 9 andro taorian 'ny fotoana ny embryon mpanetsa na aorian'ny famokarana atodinaina, (ohatra: rehefa tairina ny famokarana atodinaina, amin'ny andro 3, 6 sy 9).
Raha lehilahy tsy fiterahana noho ny fandikana ny dingana, spermatogenesis dia voalaza miaraka amin'ny follicle-mandrisika hormonina 1 fotoana isan'andro na 2-3 fotoana isan-kerinandro, fara fahakeliny 3 volana mba hanatsarana ny kalitao sy ny dia be ny spermogram. Azo ampiasaina ho monotherapy. Ny presbytera dia nomena ny 1000-2000 IU. Amin'ny fampidirana ilay holatra dia ilaina ny manakana ny fitsaboana indray amin'ny testosterone, raha misy izany.
Ny fivoaran'ny firaisana ara-nofo amin'ny ankizilahy - ny ratsy indrindra dia aseho amin'ny doka 1500 IU, ny fitsaboana - farafahakeliny volana 6. Ny fanafody dia entina 2-3 in-droa isan-kerinandro.
Cryptorchidism: ho an'ny ankizy eo ambany 2 taona, ny fatra omena 250 iu 2 7 fotoana isan-andro amin'ny Mazava ho azy fa, fara fahakeliny 6 volana; Avy 2 mba 6 taona - 2 fotoana isan-andro 7 for 500-1000 iu 6 Mazava ho azy fa ny volana; Ho an'ny ankizy mihoatra ny 6 taona - 2 fotoana in-7 andro ho an'ny 6 volana ho 1500 ME. Raha tsy ampy ny vokatra dia azo averina indray ny fitsaboana.
• Ny aretim-pihetseham-pandrenesana mahery vaika,
• Ny tsy fahampian-tsakafo tsy voatanisa.
Ny soritr'aretina manasitrana ny oviana: ny tsy fahampian-tsakafo, ny fanaintainan'ny alika, ny aretim-pivalanana, ny fanaintainana ao amin'ny tratra, ny fihenan-tsakafo kely na ny habeny, na ny fisehon'ireo cysts oviana. Ny soritr'aretina mahery vaika amin'ny oviana: ny fivelaran'ny cysts mananotena be loatra (izay misy fikorontanam-pandrefesana), ny fahazoana mavesatra, ny endriky ny ascites, ny fivoaran'ny fahasarotana thromboembolic sy ny hydrothorax.
lahy: Ny fihenan'ny fluid sy ny natiora ao amin'ny vatana noho ny fitomboan'ny taovan'ny olona, ​​ny fiovan'ny toetran'ny prostaty, ny gynecomastia, ny fanorenana ary ny fanitarana ny penis noho ny fitomboan'ny fitsaboana testosterone ao amin'ny ra, ny fihanaky ny tendrontany, ny fitomboan'ny vozona ao anaty lakandrano, ny toetrany fanovana, toetra momba ny dingana voalohany amin'ny fahamaotinana.
Ao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy; dia mety hisy korontana any amin'ny tsindrona toerana noho ny biolojika fiandohan'ny ny lo (fanaintainana, fitohanana, fanorotoroana, mangidihidy, mamontsina). Azo atao koa ny fanehoan-kevitry ny fihanaky ny aretina (tazo, malemy).
• Tumors miankinan'ny atidoha (kanseran'ny nono na voan'ny kanseran'ny nono, kanseran'ny prostaty);
• aretina endrinina tsy voatsabo (tsy fahampian'ny fitrandrahana adrenaly, hypothyroidism, hyperprolactinemia);
• Ny tsy fahampian'ny vehivavy mifamatotra amin'ny fanelingelenana ny valanaretina;
• Kanseran'ny oviana,
• Fihetseham-po tsy mety amin'ny gonadotropic ny zava-mahadomelina hormonina na iray amin'ireo singa ao amin'ny holatra.
Ny Pregnil dia tsy mifanohitra amin'ny maha-bevohoka azy, dia asaina ny mitazona ny vanim-potoan'ny luteal amin'ny vanin-taolana. Na izany aza, tsy azo atao ny manolotra ny rongony amin'ny renim-pianakaviana mitaiza.
Ny gonadotropine chorionic ny olona dia maneho fialantsasatra ambany. Tsy voatanisa ireo mari-pamantarana misy ny overdose mitongilana amin'ny fitantanana parentera. Ao amin'ny vehivavy manohitra ny fihanaky ny habokana, dia mety hitranga ny fihoaram-pe.
Vovonan'ny Lyophilisée ho an'ny famolavolana vahaolana amin'ny solika ao amin'ny ampoule de 1500 IU; 5000 IU. Ny kitapo dia misy solvent. Ao anaty boaty misy carton, ny amponga 3 dia loaka ao anaty fonosam-panesoana.
Tokony ho voatahiry ao amin'ny vata fampangatsiahana ao amin'ny toetr'andro ny hafanana amin'ny hafanana 2-15 ° C tsy mihoatra ny 3 taona. Jereo ny fepetra takiana mandritra ny fitaterana.
Zava-manan'aina: gonadotropine chorionika.
Fanampin'ny singa fanampiny: mannitol, tsy misy rano vita amin'ny dihydrophosphathy, hydrochloride sodium hydrophosphate, carboxymethylcellulose.
Ny hormonina, ny analôlôniny sy ny fanafody hormonal
Fitsaboana mifototra amin'ny hormonina momba ny firaisana ara-nofo sy ny angano synthetic
Misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny vohoka amin'ny ankapobeny amin'ny fikajiana ny gripa gonadotropine. Raha mitombo ny teknolojian'ny fanabeazana, dia mitombo ny mety hitera-piterahana. Raha misy fanondroana ny fanitsakitsahana ny tsy fahampian-tsakafo - dia mampitombo ny mety ho voka-dratsin'ny ectopic (ectopic). Ao anatin'ilay tranga farany, aorian'ny fanombohan'ny bevohoka, ny toerana uterine ny atody fetal dia tsy maintsy voamarina amin'ny fitsaboana ultrasound ny tranonjaza. Alohan'ny handikana ny zava-mahadomelina dia tsy tokony hiantsoroka ny endocrinopathies tsy voamarina (tsy fahita firy ny tendon-tsiran-tsilo, fihinanan-jiro na loharano adrenal).
Ny fihenan'ny vehivavy amin'ny tsy fahampian-tsakafo noho ny fahasimbana na ny fanavotana dia mety hitarika amin'ny fihoaram-peo amin'ny tsy fahampian-tsakafo, miaraka amin'ny fampitomboana ny hormonina folikela. Ao anatin'ireo tranga ireo, mialoha sy mandritra ny fitsaboana (mandritra ny fotoana fohy), ny fanaraha-maso ultrasound dia ilaina hanombanana ny fivoaran'ny folicle. Azo atao ihany koa ny manavaka tsikelikely ny votoatin'ny estradiol ao amin'ny sera ra. Ny fihenan'ny estradiol (2-fold ho an'ny 2-3 andro) dia mety hanondro ny fivoaran'ny ankamaroan'ny follicles. Azo atao ny manamarina fa tsy voatery hipopotipotena ny ovy. Raha misy ny fanamarinana ny aretina, ilaina ny hampiato avy hatrany ny fampidirana ny vola izay misy hormonina feno mihinam-paty, satria misy ny fandrahonana ny fivoaran'ny aretim-pangalatra sy ny fifehezana ny ovulation. Tokony hokarakaraina manokana ny fikarakarana ny marary amin'ny oviana maro samihafa.
Ny fampidirana ny kôdonôna gonadotropine dia miteraka fitomboan'ny fampidirana androna, ka mety hisy fahasimbana eo amin'ny toe-javatra ankapobeny na ny fivoahana amin'ny aretim-pivalanana na aretina mahery vaika midadasika, miadana (anisan'izany ny migraine amin'ny anamnesis), ny fihanaky ny homamiadana, ny fihenan'ny taova, ny epilepsy . Ho an'ny olona toy izany, ny fanafody dia mitandrina amin'ny fitsaboana akaiky.
Mba hisorohana ny fahateren'ny tovovavy amam-behivavy aloha vao manomboka, dia ilaina ny milaza azy ireo amim-pahamalinana mandritra io vanim-potoana io. Amin'io tranga io, ny fampidirana ny fako dia tokony atao eo ambany fifehezan'ny toetry ny rafi-pitiliana musculoskeletal.